DEG DEG:MADAXWEYNIHII HORE EE DDALK YAMAN, CALI CABDALA SAALAX OO "LA DILAY"
Telefishin ay Xuutiyiinta maamulaan oo lagu magacaabo al-Masirah ayaa baahiyay muuqaalka nin wasiirka arrimaha gudaha lagu sheegay oo shaacinaya in "la afjaray dhibaatada maliishiyada khiyaanada qaran sameysay, lana dilay hoggaamiyahooda".
Isbeheysiga iyo dowladda Cabdurabah Mansuur Haadi ayaa soo dhoweeyay hadalkaasi. Balse, Xuutiyiinta waxay Saalax ku eedeeyeen in uu "afgembinayo" isbeheysi "uusan weligii aaminin".
Dagaalka iyo go'doominta ayaa sababay 20.7 milyan oo qof in ay si adag ugu baahdaan gargaar bini-aadamnimo. Arrintaas ayaa lagu tilmaamay in ay tahay cunta la'aanta ugu xun Caalamka, waxaana ka dhashay daacuun dilay 2,211 qof, tan iyo bishii April.
Dhageyso : Xildhibaan Cali Nuur Boodaaye oo ka hadlaya Xariga Mas’uuliyiinta Universal TV
DHAGEYSO:-WARKA HABEENIMO EE VOD RADIO XAMAR BY MAHAD MAXAMED CALI
Taliye Kuxigeenkii Saldhiga Magaalada Baydhabo oo Caawa la dilay
DHAGEYSO: Dr. Cali Baab oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool Dalka Ingariiska Gaar,ahaan Magaalada London ayaa ka hadlay Arimo Badan Oo Xasaasi Ah Ka Waraysi Uu Siiyay idaacadda Xamar Radio VOD
Dhageyo;Safiirkii hore ee dowlada sooomaliya ee wadanka Kenya ayaa shegay in xariirka dowladasoomliya iyo Kenya uu yahay mid wanagsan
Madaxweyne Hore Turkiga oo geeriyoday
DHAGEYSO: Barnaamijka Wargeysyada Iyo Wacaalka Dunida Xamar Radio VOD By MAHAD MAXAMED CALI
Dhageyso: Safiirkii Hore Somaliya u Fadhiyey Kenya oo Ka Hadlay Socdaalkiisa Nabeed
Dhageyso: Gudoomiyahii Hore Bardaale oo Ku Baaqay In la Ilaaliyo Xaquuqda Shacabka Bardaale